Alàna (vahoaka) - Wikipedia
Fifindrà-monin' ny Alàna
Ny Alàna dia vahoaka iraniana skitiana, voalaza tamin' ny taonjato voalohany tany amin' ny lemaka feno ahitra ao amin' ny tapany avaratra amin' i Kaokazy. Atao hoe Alani izy ireo amin' ny teny latina, fa Ἀλανοί / Alanoi kosa amin' ny teny grika.
Nandritra ny Fananiham-bohitra Lehibe, ny faharesen' izy ireo manoloan' ny Hona tamin' ny fiandohan' ny taona 370 dia niteraka ny fiparitahan' ireo vahoaka alàna, ny sasany tamin' izy ireo dia nanatevin-daharana, ho mpiara-dia na mpikarama an' ady, amin' ireo fanjakana jermanika any Andrefana, fa ny hafa kosa nanorim-ponenana tany Eorôpa Atsinanana, indrindraindrindra tany avaratr' i Kaokazy izay nandrosoan' i Alania izay nitana anjara toerana stratejika lehibe, voalohany tamin' ny fifandonana teo amin' ny Empira Sasanida sy ny Empira Rômana Atsinanana na Empira Bizantina (taonjato faha-6-7), avy eo teo amin' ny Empira Kazara sy ny fanitaran-tany nataon' ny Arabo tao Kaokazy (taonjato faha-8 - faha-9).
Rehefa afaka tamin' ny fiahian' ny Kazara dia lasa fanjakana lehibe i Alania kaokaziana, lasa kristiana tany am-piandohan' ny taonjato faha-10 ary voamariky ny kolontsaina bizantina. Tamin' ireo taona 1220-1240, ny Alàna dia niharan' ny fahatafintohinana tamin' ny fananiham-bohitry ny Môngôly tany Eorôpa izay niteraka fiparitahana fanindroany, ary noraisin' ny olona hafa izy ireo avy eo. Mpitsoa-ponenana any amin' ny lohasaha ao afovoan' i Siskaokazia (na Kaokazia Avaratra), ny Ôsetiana (na Ôseta) no hany Alàna nahatahiry ny fiteniny sy ny ankamaroan' ny fomban-drazanany.
I Ôsetia sy i Alania dia fanjakana milaza ho manam-piaviana alàna: ny Ôsetiana (Ôseta) ankehitriny, izay monina amin' ny andaniny roa amin' ny hadilalan' i Darial na Dar-i-Alan, ny "hadilalan' ny Alàna", dia mampiseho ny tenany ho taranaky ny Alàna mivantana, izay mpitaingin-tsoavaly mpifindrafindra monina mifandray amin' ny Sarmatiana ary tena akaiky ny Iaziga sy ny Rôksôlàna.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Alàna_(vahoaka)&oldid=1043831"
Voaova farany tamin'ny 11 Febroary 2022 amin'ny 10:06 ity pejy ity.